Ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ajnabi ah oo burburiyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Jubbada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandCiidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ajnabi ah oo burburiyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Jubbada Dhexe
June 11, 2017 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ajnabi ah oo burburiyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Jubbada Dhexe. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan ciidamo ajnabi ah ayaa maanta oo Axad ah burburiyay saldhig tababar oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe, sida uu bayaan ku sheegay madaxweynaha Soomaaliya.
“Gelinkii hore ee maanta, waxaan u ogolaaday ciidamadayada oo taageero ka helaya saaxiibo caalami ah in ay qaadaan weerar ka dhan ah saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel u dhow magaalada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. Howlgalku waxa uu ahaa mid lagu burburiyay talis muhiim ah oo ay Al-Shabaab lahaayeen. Tani ugu dambeynta waxay kala daadin doontaa awooda cadowga ee uu u leeyahay in uu ku qaado weeraro cusub gudaha Soomaaliya.” Ayuu bayaan ku yiri Madaxweynuhu.
Bishii lasoo dhaafay, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah maeeshiyada Al-Shabaab kuwaas oo muddo u dagaalamayay sidii ay awooda uga tuuri lahaayeen dowladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Wefdi katirsan golaha wasiiradda Puntland oo ku wajahan deegaanka Af urur ee Buuraha Galgala
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay dabada ka riixayaan ciidamada AMISOM ayaa gacanta ku dhigay maanta oo Isniin ah magaalada Tiyeeglow ee gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya, sida ay sheegayaan ilo-wareedyada. Ilo-wareedyada ayaa sheegaya [...]